The Great Alaskan Husky: Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato - Taranka
Weligaa ma aragtay eey u eg sida Siberian Husky oo leh midab jaakad kale leh? Taasi waxay u badan tahay inuu ahaa Alaskan Husky.
Alaskan Huskies ayaa caan ku ah awoodooda gudaha jiidaya . Intaa intaa ka badan, bakooradani waa daacad ah oo jacayl leh , sidaa darteed waxay ka dhigi doonaan wax ku darista ugu fiican qoysaska badankood.
Marabtaa inaad sifiican ubarato Alaska Husky? Akhri oo wax badan ka ogow.
Asalka Alaska Asky
Muxuu u eg yahay Alaskan Husky?
Ey jecel oo leh dabeecad dib u dhac ah
Sida loo tababaro Alaskan Husky
Immisa jimicsi ayuu Alaskan Husky u baahan yahay?
Waa maxay arrimaha caafimaad ee uu yeelan karo Husky?
Muxuu cunaa Alaska Husky?
Arooskaaga Alaska Husky
Immisa ayey ku kacaysaa lahaanshaha Alaska Husky?
Alaskan Husky ma yahay eeyga kugu habboon adiga?
Alaskan Husky waa nooc ka mid ah Husky mana aha nooc gaar ah oo u gaar ah.
Bakooradani waxay ugu horrayn ahaan ahayd a eyga shaqeeya , gaar ahaan loo isticmaalo sledding.
Eygan xoogga badan waxaa soo saaray mushers ama eyda bini'aadamka ee sled tartameyaasha ka yimid wadan kale Eyga Inuit taranka
Qaar ka mid ah noocyadan waxaa ka mid ah Siberia Husky , Alaskan Malamute , Eyga Eskimo, tilmaame Jarmal Shorthaired, Soohdinta Collie , Adhijirka Jarmalka , Inuit Husky, iyo kan Greyhound.
Khadadka dhiigga ee la isticmaalo waxay kuxirantahay ujeedada gaarka ah ee taranka. Sidaa darteed haddii soo-saaraha uu rabo eey baraf ah si uu u tartamo, waxaa laga yaabaa inuu wada dhasho astaamo saafi ah Tilmaame iyo Siberia Husky ah.
Sanadkii 2015 , waxaa la ogaaday in - inkasta oo ay khilaafaadka - Alaskan Husky, Alaskan Malamute, iyo Siberia Husky dhammaantood waxay lahaayeen astaamo hidde ah oo la mid ah oo ay qaraabo dhow ahaayeen Chukotka eeyaha sled ee Siberia.
Alaskan Husky wuxuu si dhakhso leh caan uga noqday liiska eeyaha tartamaya sababtoo ah cajiibkiisa xawaare. Inta badan Huskies-ka lagu arko tartamada eeyaha ee maanta waa Alaskan Huskies.
Alaskan Huskies waa ka weyn ka badan Siberia Huskies, laakiin waxay leeyihiin dhismo caato ah. Si ka duwan dhiggooda Siberia, kanaalooyinka Alaska badanaa waxay leeyihiin indho bunni ah.
Noocyadan isweydaarsiga ahi waxay leeyihiin lugo dhaadheer, laab qoto dheer, ballaadhan, iyo dhabarkooda oo duuban oo laalaabmay. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay u muuqdaan inay noqdaan yeey u eg muuqaal ahaan.
Huskies-ku waxay yeelan karaan jaakado midabbo kala duwan leh, oo ay ku jiraan cawl, caddaan, madow iyo caddaan, midab cad, oranji, bunni, casaan, ama kareem.
Koodhadhkoodu waa dherer gaaban ama dhexdhexaad ah oo aan waligood dheerayn. Dharka gaagaaban ayaa ka caawiya baahinta kuleylka markay ku tartamaan tartamada.
Waxay leeyihiin koodhadh culus oo culus iyo jaakad sare oo aad u sareysa si ay uga ilaaliso canaasiirta inta ay jiidayaan shaati.
Imisa ayuu helayaa Husky?
Ragga qaangaarka ah ee Alaskan Husky waxay leeyihiin miisaan caadi ah oo u dhexeeya 40 ilaa 60 rodol (21 ilaa 25 kg), halka dumarka qaangaarka ah culeyskoodu yahay 35 illaa 55 rodol (17 ilaa 19 kg). Labada jinsiba waxay leeyihiin celcelis dhererka 23 ilaa 26 inji qaan gaadhnimada
Ka hel fikrad wanaagsan sida eeygu u dhex mari karo fiidiyowgan:
Alaskan Huskies waxay leeyihiin a anshax deggan marka loo eego ilma adeeradooda Siberia Husky iyo Alaskan Malamute. Waa dad dabeecad wanaagsan oo saaxiibtinimo u leh dadka ay yaqaanaan.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan shisheeyaha, Huskies-kani waxay u badan tahay inay ku uriyaan dad aan la aqoon halkii ay ka ciyi lahaayeen.
Alaskan Husky wuxuu noqon karaa eey qoys fiican. Wuxuu jecelyahay dadka iyo eeyaha kale waxaana loo yaqaanaa an xiise xannaaneeye . Wuxuu jecel yahay shirkadda qoyskiisa aadanaha wuxuuna caan ku yahay ku boodidda dadka kalgacal, ee maahan xukun.
Noocani wuxuu leeyahay dabeecad jilicsan, taas oo macnaheedu yahay in lagu aamini karo carruurta.
Eygan marar dhif ah ayuu dagaal ku dhacaa , laakiin weli waxaa ugufiican in la kormeero isdhexgalka ka dhexeeya carruurta yaryar iyo xayawaankaaga rabaayadda ah. Tani waxay xaqiijineysaa in aysan dhacdooyin dhacdooyin liidata dhicin oo aan cidna wax ku noqon.
Alaskan Huskies ma ciyey?
Alaskan Huskies waa kuwo lagu kalsoonaan karo marka la jiidayo dharbaaxada waxayna aad ugu fiican yihiin wadada socodka, laakiin ma ahan ilaaliyeyaal waaweyn. Isu-geyntaas ayaa ah ma jecli ciyo ; waxa laga yaabaa inay eegaan shisheeyaha halkii ay ka ciyi lahaayeen si ay kaaga digtoonaadaan khataraha ka iman kara.
Si kastaba ha noqotee, sida ilma adeeradooda Siberia, eeyahaas jeclahay in la ooyo . Waxay u ooyi karaan dhowr sababood awgood:
Wuxuu doonayaa inuu soo jiito dareenkaaga.
Eeyadu waxay u ooyi karaan sida muujinta walwalka kala-tagga.
Husky-gaaga ayaa laga yaabaa inuu ka jawaabayo waxyaabaha kiciya ee ka jira deegaankiisa, sida shey cusub oo guriga yaala ama ambalaas oo banaanka ka soo gudbaya.
Eeyadu waxay u ooyaan inay u dhawaaqaan xanuun ama raaxo la'aan.
Alaska Huskies waa caqli iyo tababarka ka jawaaba .
Qaar ka mid ah waxay lahaan karaan xarig adag, inkasta oo ay ugu wacan tahay madax-bannaanidooda dabiiciga ah.
Waa inaad adigu sameysid sida hogaamiyaha xirmada oo noqo mid adag markaad tababaraysid Alaskan Husky; haddii kale, waxay noqon karaan madax adag oo xun.
Natiijooyinka ugu wanaagsan, meerisyadan waa inay ahaadaan tababaray goor hore sida eey. Sida yar 8 toddobaad jir , Alaskan Husky wuxuu diyaar u yahay inuu barto amarrada aasaasiga ah.
Kulamada tababarka waa in la ilaaliyaa gaaban si uu ugu sii hayo xiisaha iyo xiisaha uu u qabo barashada waxyaalo cusub.
Xoojinta wanaagsan wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa shaqadan Husky. Sida eeyaha badankood, waxay uga jawaabaan sifiican ammaanta iyo daaweynta marka loo eego ciqaabta.
Hadal digniin ah, in kastoo - eey tababbarku ku lug yeelan doono xoogaa shaqo adag, dulqaad, iyo joogtayn.
Alaskan Husky sidoo kale waa inuu helaa tiro badan is dhexgalka bulshada , gaar ahaan inta ay weli yartahay. Waqti qaado si aad ugu baratid xayawaannada kale ee guriga deggan.
Markii uu talaalkiisa qaato, u kaxee beerta eeyga si uu ula ciyaaro eeyaha kale oo uu ugu raaxeysto xoogaa ciyaarta ka baxsan.
Helitaanka Husky-gaaga inuu ku dhageysto
Kahor intaadan bilaabin tababbar kasta oo aad ka qaadato Alaska Husky, hubi inaad adigu samaysatay sida alfa ama hogaamiyaha baakadka. Waa inay u cadaato Alaskaaga Husky taas adigaa masuul ah iyo in awoodaada aysan aheyn in laga hor yimaado.
Waa kuwan wax yar oo aan samaynno ama aadan samayn inaad raacdo sida alfa:
Waa inaad markasta ahaataa midka hore inuu soo galo oo uu baxo albaabka dhexdiisa.
Hogaamiyaha waa inuu had iyo jeer horta cun . Cun eeygaaga kaliya kadib marka aad dhameyso cuntadaada.
Samee Alaskan Husky inuu ka guuro jidka halkii aad ku wareegi lahayd.
Ha u fiirsan eeygaaga markasta oo uu dalbado. Deji xeerarka oo isaga siiso dareenkaaga aan kala-go 'lahayn oo keliya markaad aragto wax ku habboon.
Alaskaaga Husky waa inuu lahaadaa mid loo qoondeeyay aagga jiifka . Weligaa ha u oggolaan eeygaaga inuu sariirta kula seexdo.
Adkaysi iyo adkeyn, Alaskan Husky ayaa aakhirka baran doona ku dhageyso maaddaama hoggaamiyaha baakadka iyo tababariddiisu ay aad u fududdahay.
Alaskan Husky waxaa loogu talagalay jiido baraf ah, oo sababtan awgeed, waxay leeyihiin qadar aad u fiican oo adkeysi ah.
Meelahaani waa kuwo ciyaar badan oo firfircoon, sidaa darteed waxay u baahan yihiin waxyaabo badan jimicsi xoog leh maalin kasta. Waxay sidoo kale u baahan yihiin waxyaabo badan kicinta maskaxda caqligooda darteed.
Alaskan Husky ayaa u baahan ugu yaraan saacad jimicsi maalin walba. Jadwalka jimicsiga eeygaaga ee maalinlaha ah waa inuu ku jiraa laba 20 illaa 40-daqiiqo oo socod socod ah ama saacad orod ah. Haddii aad jeceshahay baaskiil wadista, u oggolow inuu ka garab ciyaaro baaskiilkaaga safaradaada ku wareegsan xaafadda.
Waxaad kaqeyb qaadan kartaa Husky-gaaga kaqeyb qaadashada cayaaraha sida dharbaaxada iyo barafka , maaddaama kuwani ay ka sii caawin doonaan inuu gubo dhammaan tamarta uu haysto oo uu ku sii hayo inuu ahaado mid caafimaad qaba oo caafimaad qaba.
Bakooradani waxay ku fiicnaan doontaa cayaaraha sida firfircoonaan , adeecid, isu soo bax iyo xoolo raacid. Hawlahaasi waxay isaga fursad u siinayaan inuu ka shaqeeyo jirkiisa iyo maskaxdiisa labadaba.
Husky-gaagu wuxuu ku raaxeysan doonaa xoogaa waqti-barxad ah oo ciyaarta ah sida ugu badan, laakiin hubi in dayrkaagu u diyaarsan yahay eygaaga. Kaadhadhkan ayaa caan ku ah ahaansho baxsada fanaaniinta . Iyagu waa boodboodiyeyaal iyo qodayaal.
Eygaaga ku hayso gurigaaga adoo dhisanaya xayndaab alwaax siman ugu yaraan 6 fuudh lagu dhisay hareerahaaga. Qoryaha jilicsan ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee xayndaabka, maadaama Husky uusan awoodi doonin inuu koro qalabka.
Hubso in eeygaagu uusan si xad dhaaf ah u bixin, inkasta, gaar ahaan maalmaha diiran, qoraxdu jirto. Way sababi kartaa kululaynta Alaska Husky-kaaga oo laga yaabo inuu hadhow u horseedo arrimo caafimaad oo halis ah.
Markaad ka maqnayn socodkaaga Husky, waxaad isaga mashquulin kartaa qaar ka mid ah ciyaaraha maskaxda sida dhuumasho oo raadso iyo ugaarsi hantiyeed. Alaabta lagu ciyaaro ee xujada leh iyo calalinta calaamadaha ayaa sidoo kale kaa caawin doona buuxinta baahida eeygan ee kicinta maskaxda.
Alaskan Huskies waxay u nugul yihiin dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan, gaar ahaan kuwa ku badan noocyada waalidkood.
Soosaarayaasha sumcadda leh ayaa caafimaad ka baari doona eeyahooda waxayna kugu wargalin doonaan wixii ah arrimo caafimaad ee eeyahaaga u nugul yihiin si aad si ku filan ugu diyaar garowdo xaaladahaas.
Qaar ka mid ah xaaladaha caafimaad ee saameyn kara Alaskan Huskies waxaa ka mid ah:
Dhago la'aanta dhaxalka
Cilad-xumo ku dhalata dhuunta (oo keenta dhawaq xiiq marka la neefsanayo)
Cudurka kaydinta Lysosomal
Atrophy Retinal Horusocod ah
Cudurka 'Corneal dystrophy'
Cudurka 'Uvedermatologic syndrome'
Husky-kaaga sidoo kale waa u nugul yahay Alaskan Husky Encephalopathy , taas oo ah cudur maskaxda ah oo aan dawo lahayn oo ku soo baxa eeyaha. Xaaladdani waxay sababtaa arrimaha neerfaha sababo la xiriira eeyga oo aan awood u lahayn inuu si sax ah uga baaraandego maaddada loo yaqaan 'thiamine' ee cuntadiisa.
Muddo intee le'eg ayuu noolaa Alaska Husky?
Alaskan Husky wuxuu leeyahay celcelis noloshiisa 10 ilaa 15 sano . Waad ku caawin kartaa kordhinta nolosha eygaaga adoo u kaxeynaya dhakhtarka xoolaha si baaritaano joogto ah loogu sameeyo, adoo siinaya cuntada saxda ah, iyo inaad hubiso inuu helo jimicsi ku filan.
Waxa kale oo aad naftaada ka badbaadin kartaa kharashyada iyo xanuunka wadnaha eey caafimaad qabin, gaagaaban oo gaagaaban ah adoo ka helayo cunuggaaga aabbe sumcad leh.
Alaskan Huskies waa eeyo, eeyo tamar badan leh, waana ay u baahan yihiin cuntooyin tayo sare leh hodan ku ah kalooriyeyaasha si ay u joogteeyaan heerarkooda tamarta.
Qofka weyn ee Alaskan Husky wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 1100 kalori maalintii.
Senior Alaskan Huskies waxay ubaahan yihiin 1000 kaloori halka kuwa firfircoon ee Huskies - sida kuwa jiida sleds ama kaqeyb gala jinsiyadaha - waxay ubaahanyihiin uguyaraan 1800 kalori maalin walba.
Ujeeddadiisu tahay inaad siiso Alaskan Husky cunto ay ku jiraan ugu yaraan 22% protein iyo 8% dufan .
Waxyaabaha ku jira borotiinka sare waxay ilaalin doonaan kala-goysyada eygaaga mid caafimaad qaba oo kor u qaadaya horumarka muruqyada caafimaadka qaba, halka waxyaabaha dufanka leh ay ka caawin doonaan Husky inuu ilaaliyo heerarkiisa tamarta.
Alaskan Husky caafimaad qabta waa inuu lahaadaa cunto ay ka mid yihiin miraha, khudradda, hilibka, iyo kalluunka, gaar ahaan salmon . Eeyadan ayaa si fiican u geyn doona kalluunka, taas oo ah eeyo badan oo caato ah oo ku nool Alaska.
Ka fogow inaad siiso eeygaaga salmon ceyriin , inkastoo, maadaama ay ku jiri karaan lafo yaryar iyo dulin.
Waxaad sidoo kale quudin kartaa cuntada eyga oo tayo sare leh. Sii 3 ilaa 4 koob oo ah eeyga cunnadiisa qalalan u kala bax laba cunto. Eygaagu sidoo kale waa inuu lahaadaa biyo macaan markasta.
Ka sokow borotiinka hilibka, noocyo badan oo ganacsi oo kibble ah ayaa sidoo kale ku jiri kara borotiinada dhirta sida misir iyo digir, oo Husky-kaaga uu ka faa'iideysan doono.
Isku day inaadan quudin eeygaaga Alaskan Husky cunnooyinka soo socda:
Cunnooyinka hodanka ku ah qamadiga, budada caanaha laga sameeyay, caano saafi ah, iyo caano
Cunto cusbo leh
Sabiib iyo canab
Immisa jeer ayey tahay inaad quudiso Husky-gaaga?
Eygaaga Alaska Husky waa in la quudiyo saddex jeer maalintii . Markuu gaaro qaan gaar (ka dib sanad), waad jari kartaa inta jeer ee laba cunto maalin kasta .
Alaska Husky eyda ayaa ah ma cunayaal waaweyn . Caadi ahaan ma cuni doonaan markay gaajoodaan. Iyaga oo Quudiya laba saacadood jimicsiga ka hor waa inuu noqdaa mid ku filan si uu u joogteeyo tamartooda iyo xooggooda.
Alaskan Husky wuxuu leeyahay jaakad is-nadiifin sidaa darteed isagu sida caadiga ah wuu ka fudud yahay habar wacitaankiisa marka loo eego noocyada kale.
Eygan si dhexdhexaad ah u daadisaa oo u baahan cadayasho laba ilaa saddex jeer usbuucii .
Intii lagu guda jiray xilli daadinta , hase yeeshe, filo daadis ballaaran iyo afuufid, markii dhogorta waaweyn ee dhoobadu ay soo dhacaan.
Waxaad ubaahantahay inaad cadayato jaakada eygaaga maalin kasta muddadan. Diyaar u noqo inaad isticmaasho faakiyuumka marwalba marar badan, sidoo kale.
Maydhashada Alaska Husky waa in lagu hayaa ugu yaraan. Eygan uma urayo oo wuu iska ag dhaafi doonaa bishiiba mar . Hubso inaad isticmaasho shaamboo eyga dhakhtarka la ansaxiyay marka aad maydhanaysid bakooraddaada.
Isaga ilkaha u baahan tahay cadayaday maalin walba ama ugu yaraan laba jeer usbuucii. Isticmaal cadayga eey iyo cadayga oo bilaw caado inta Alaskan Husky uu weli yahay eey si uu ula qabsado nidaamka caadiga ah.
Ciddiyaha oo la gooyo waa la qaban karaa bishiiba mar . Adiga ayaa iska jarjaraya naftaada, laakiin ka taxaddar inaadan si qoto dheer u jarin si aad uga fogaato inaad wax u yeeleyso eeygaaga.
Dhagahaaga Husky waa in la baaro hal mar usbuucii wixii calaamado ah cuncun, casaan, infekshan, iyo wax soo saar. Nadiifi eeyahaaga dhegaha adoo isticmaalaya nadiifiye dhakhtarka la ansixiyay iyo dhowr kubbadood oo cudbi ah.
Waxa jira kharashyo qaarkood oo laga fiirsado markii aad go'aansato inaad yeelato Ey yar oo ah Alaskan Husky sida xayawaan rabaayad ah. Kuwa bilowga ah, waxaa jira qiimaha eeyaha 'Husky' laftiisa lafteeda.
Alaskan Husky eeyaha yaryar oo ka socda khadka sare ee tartanka ayaa ku kici kara meel kasta oo ka baxsan $ 10,000 ilaa $ 15,000 mid kasta! Dhinaca kale, arday caafimaad qaba oo loo yaqaan 'Alaskan Husky' oo aan ku abtirsiin karin tartan ka socda agab-yaqaan sumcad leh ayaa ku kacaya qiyaastii $ 1,000 ilaa $ 1,500 .
Kharashyada bilowga ah ee kaabayaasha sida sanduuqa, kolalka, xarkaha, xamaalka, gogosha, iyo fijaannada ayaa laga yaabaa inay ku kacaan $ 220 .
Qaar ka mid ah hababka caafimaadka sida kala bixida ama dheecaanka jirka, tallaalada, baaritaanka dhiigga, baaritaanka jirka, microchipping iyo xaar goynta ayaa ku kici doonta $ 290 , iyadoo kuxiran meesha aad ku nooshahay. Kharashyada caafimaadka sanadlaha ah sida tallaalada, boodada iyo sax ka hortagga, hubinta, iyo caymiska xayawaanka ayaa joogi lahaa $ 485 .
Qiimaha sanadlaha ah ee eeyga tayo sare leh ee cunnada qalalan ee qalalan iyo dawaynta eeydu way ag joogi lahaayeen $ 235 , halka kharashyada kale ee kaladuwan sida waxyaabaha caruurtu ku ciyaarto, tababarka aasaasiga ah, iyo laysanka ay ku saabsan yihiin $ 265 sanad.
Halka laga helo Husky-gaaga cusub
Waxaad haysataa laba ikhtiyaar haddii aad rabto inaad guriga u qaadato Alaskan Husky. Haddii aad rabto ilmo yaryar oo caan ah oo loo yaqaan 'Alaskan Husky', shaygaaga ugu fiican ayaa ah abuure .
Dhammaan kuwa soosaarayaasha ah looma abuurin siman, in kastoo, sidaa darteed waa inaad sameysaa cilmi baaris si aad uhesho abuure aamin ah. Bixiyaha saxda ah ayaa ku siin kara dukumiinti ama caddeyn in eyyadiisa iyo waalidkuba ay ahaayeen baaritaanka caafimaadka .
Waxa kale oo aad dooneysaa inaad doorato abuure oo aan ka labalabeyn doonin inuu kuu oggolaado inaad soo booqato. Eydu waa inay ku noolaadaan a jawi nadiif ah, waasac ah waana inay waqti la qaataan qashinkooda iyo waalidkood.
Waa kuwan qaar soosaarayaal sumcad leh si loo eego:
Qodobbada Lama yaqaan (Minnesota)
Ha haysan waqti aad ku guriga ku tababarto eey ? Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad korsato Alaskan Husky. Korsashada eeyga badanaa waa ka qiimo jaban tahay. Nasiib wanaag, waxaad sidoo kale awoodi kartaa inaad guriga u qaadato an eyga ka weyn taasi horeyba way u tababbartey guriga waxayna ogtahay amarrada aasaasiga ah.
Haddii korsashada adigu ay tahay adiga, hubi ururradan samatabbixinta iyo hoyga diiradda saaraya Huskies:
Samatabbixinta Eyga Waqooyiga California (Kaalifoorniya)
Samatabbixinta Heartland Husky (Oklahoma)
Tahoe Husky Samatabbixin (Waqooyiga California / Waqooyiga Nevada)
Alaskan Husky waa eey saaxiibtinimo leh oo leh dabeecadda deggan .
Wuxuu jecel yahay inuu waqti la qaato qoyskiisa, wuxuuna lahaan doonaa dabeecad dib u dhac ah oo ku saabsan carruurta.
Ciyaartan, tamarta sare leh jecel adventures , sidaa darteed wuxuu u sameyn doonaa wehel aad u fiican dadka leh qaab nololeed firfircoon iyo kuwa jecel banaanka.
Ma rabtaa saaxiibka canine ka ah oo maalin walba kula orod doona? Husky kani waa u kici doonaa.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad tixgelisaa in Alaskan Husky uu yahay a daadinta dhexdhexaad dhexdhexaad ah , sidaa darteed waxaa laga yaabaa inuusan noqon eeyga saxda ah ee dadka la silcaya xasaasiyad qallalan
Isagana aad buu u ooyaa, markaa u diyaargarow inaad cabashooyinka ka hesho deriskaaga ee buuqa.
Ma leedahay Alaskan Husky? La wadaag fikradahaaga ku saabsan xayawaankan jilicsan qaybta faallooyinka ee hoose!
Wax Walba oo Waalidka Xannaanada Ilmuhu Waa inuu Ogaadaa Kahor Iibsashada Baaskiil Madoow
Macluumaadka Taranka Labka 'Red Fox Lab': Qiimaha, Dabeecada & Xaqiiqda
Jarmal Shepherd mix xuduud collie
dib u soo ceshade dahabka ah oo lagu qasay cocker spaniel
boombalada ay ku ciyaaraan cabbirka iyo miisaanka
saliidda qumbaha eeyga shaambada cuntada